Ikhaya - Hands Off!
Wamkelekile phezu Izandla - yeka ukuphathwa gadalala kwabantwana
Sizimisele ukuthintela nokukhusela ubundlobongela obuphathelele kwezesondo ebantwaneni.
Yiba yinxalenye yeqela
Siyavuya ngaye wonke umntu osixhasayo kwaye ufuna ukukhusela abantwana kuthintelo.
Amatyala okuphatha gadalala
Uvimba wethu uqulethe ngaphezulu kwamanqaku angama-5000 ahlalutyiweyo kumaphepha-ndaba malunga nobundlobongela obuphathelele kwezesondo nxamnye nabantwana.
Nikela ngoku ngenjongo elungileyo!
Wonke umnikelo unceda ukufikelela kubantu abaninzi kwaye unceda abantwana abaninzi.
Abantwana kunye nabantu abadala kufuneka baqonde imiqondiso yokuxhatshazwa ngokwesondo kunye nabantu abaxhaphaza abantwana ngokwesondo, aboni abanesidima kunye nabaziphethe kakubi ngokwesondo ngexesha elifanelekileyo. Sifuna ukwenza igalelo koku ngemfundo nangothintelo lomsebenzi.
Iphunyezwe ngoJanuwari 2021
Abaxhasi basinceda yonke imihla
Sizibophelele kukhuseleko lwabantwana iminyaka eliqela
Sisebenza kwincwadi yabantwana abaneminyaka eyi-3-7 ukukhusela kubundlobongela obuphathelele kwezesondo. Incwadi iya kwenza uthintelo lube lula kubantwana, abazali, kodwa nootitshala nabo bonke abantu abasebenza nabantwana yonke imihla.
Umbutho othi "Hands Away - Stop Child Abuse" usebenza ukuqinisekisa ukuba le ncwadi ingafumaneka simahla kumaziko okugcina abantwana, izikolo kunye nabazali.
Ukuze sifikelele kwi-kindergartens ezingama-56 kunye namaziko okugcina abantwana eJamani, i-000 eSwitzerland kunye ne-15 e-Austria enabantwana abangaphezulu kwesigidi, sidinga inkxaso yemali kwiindleko zokuprinta nokusasaza. Kumazwe athetha isiJamani kukho malunga ne-000 yezikolo eziziiprayimari kunye nezikolo zamabanga aphantsi ezinabafundi abamalunga ne-10 kwibanga lokuqala abafuna ukufundiswa.
Kwiwebhusayithi yethu unokufumana ulwazi ngakumbi malunga nombutho wethu kunye naku www.liloye.com ukubonakala kokuqala kweprojekthi yencwadi.
Enkosi ngenkxaso yakho.
IBhodi yombutho, utata nommi,
UMarc C. Riebe.
Ayisebenzi ngaphandle kwakho!
I-95% yayo yonke iminikelo iya ngqo kubantwana
Umnikelo wakho wokukhusela umntwana
Yonke iminikelo iya ngqo kuthintelo lobundlobongela obuphathelele kwezesondo
Kukhuliswe i $ 15,000
Sizinikele kule nto
Nanamhlanje abantu abaninzi bajonge kwelinye icala xa kusiziwa kulo mbandela woyikekayo kwaye ke ngesihloko.
Ngomsebenzi wethu sithanda ukufaka isandla kwinto yokuba ayingobantwana kuphela kodwa nabantu abadala abanokuyibona imiqondiso yokuxhatshazwa ngokwesondo kunye nabantu abaxhaphaza abantwana ngokwesondo, aboni abanesidima kunye nabanomdla wokuziphatha ngokwesondo ngexesha elifanelekileyo kwaye basabele ngokufanelekileyo. Kuya kufuneka banikwe amandla okuthetha ngayo (kodwa kungaze kubekho nabenzi bobubi ngokwakhe, njengoko oko kungamlumkisa).
Kufuneka icace gca ukuba ubulungisa bomlindo awunakukhetha. Nangona kunjalo, wonke umntu kufuneka azi ukuba banesidima okanye bohlwaywa ukuba kukho ulwazi malunga nokuxhatshazwa, oku kodwa akaxelwa kwigunya lokhuseleko lwabantwana okanye emapoliseni wird.
YENZA LONTO NGALO LONTO KWIHLABATHI LAKHO
Ngewebhusayithi Hands Off Sibonisa ubungakanani besi sihloko kubo bonke oomasipala okanye isixeko eJamani, eOstriya, eSwitzerland nakwilizwe liphela.
Uthotho lwefilimu "Iswekile yokusebenza", Ndikunye nomlingisi ophambili uNadja Uhl okanye umboniso bhanyabhanya"Iqela lokuzingela"Bonakalisa imingeni kakuhle. Ngelishwa, owayengumphathiswa wezangaphakathi waseJamani, uThomas de Maizière, unamaxwebhu"Umgxobhozo weSaxon”Ukucinywa kuwo onke amathala eendaba eARD.
Ifilimu yaboniswa nge-20: 15 pm kwingxoxo yephaneli elandelayo USandra Maischberger zixoxwe ngokweenkcukacha. UWilhelm Röhrig, u-UBSKM, ude watsho ukuba uyayazi kananjalo into yokubulawa kwabantwana.
AMANANI, ULWAZI, IINYANISO
IBHIZINISI YOKUTSHALA IBHILIYONI
Ngaphezulu kwesigidi se-3 sabantwana ngoku abahlala ekuthinjweni (inani lamatyala angaxelwanga kunokwenzeka ukuba abe phezulu kakhulu, nangona kunjalo). Umzi-mveliso obonelela ngemifanekiso yokuxhatshazwa kwabantwana kunye neevidiyo ezihambelanayo nayo $ 30 yezigidigidi (inani lamatyala angabhaliswanga kufuneka futhi aphakame kakhulu apha) kufuneka litsaliwe.
KWENZEKA NDAWO YONKE-NGAPHANDLE KWENDAWO YAM!
Abantu abaninzi basakholelwa kule nto. Kodwa amanani athetha ulwimi olwahlukileyo: Ukuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo kuphakathi kwethu. Inxalenye engafunekiyo yoluntu lwethu kwisikali esenza ukuba kungathethi kwaye kube nomsindo- kwaye kufuneka kusikhuthaze ukuba senze.
EJamani kukho ngokusemthethweni malunga I-15,000 yeentengiso zokuphathwa gadalala kwabantwanaNangona kunjalo, inani lamatyala angaxelwanga liphezulu kakhulu. Uqikelelo lwe-WHO lubonisa ukuba kunjalo malunga nesigidi esinye abachaphazelekayo amantombazana namakhwenkwe eJamani, ukuba omnye wabo 18 yezigidi Abantwana kunye nabantu abancinci eYurophu.
Hlala kwiklasi nganye yesikolo eJamani 1-2 abantwanaabachaphazeleka kukuphathwa gadalala ngokwesondo.
Malunga I-9 kuma-10 amatyala Ukuxhatshazwa kwabantwana kuhlala kungabonakali.
I-80-90% yabenzi bobubi yile yindoda10-20% Ibhinqa.
IMIBUTHO YOKHUSELEKO LWABANTWANA
Ukwenza oku, sisebenzisana nemibutho efana nale Ameva.org, ezazisekwe ngokudibeneyo nguDemi Moore kunye no-Ashton Kutcher okanye Ukusebenza ngaphantsi komhlaba kaloliwe NGU-Tim Ballard, esele ikhulule abantwana abangaphezu kwe-1300 ekuthinjweni nakwiminye imibutho yokukhusela abantwana ekhaya nakumazwe aphesheya.
Kukwimfuno yethu ukuba umthetho opheleliweyo uphakanyiswe ukubuyela umva. WONKE UMFAZI NENDODA eyakhe yafumana ukuxhatshazwa isengumntwana kufanele ukuba ibenethuba lokuxela umngcungcuthekisi wayo.
Onke amatyala emifanekiso gadalala kufuneka axelwe kwi-Interpol, i-BKA okanye abanye abasemagunyeni kwaye kujongwane nawo, ngoku okwenziwe ngaphantsi kwe-10% yamatyala. Ngale nto, Imithetho yokugcinwa kwedatha iyatshintshwa ngokukhawuleza, ukwenzela ntoni ipolitiki iyabizwa. Kukwanjalo nakwiziphumo zomthetho. ESwitzerland, izohlwayo okanye izigwebo ezinqunyanyisiweyo zisenokumiselwa ngenxa yokufumana imifanekiso yokuxhatshazwa kwabantwana. EJamani, umntu oba ezivenkileni unokohlwaywa ngokuqatha ngakumbi kunabaxhaphazi.
EPoland ukunyanzeliswa kokuchithwa kwamakhemikhali kwaziswa. Ngelixa oku kubonakala kugqithisile, ubuncinci ngaphezulu kwama-50% abo bonke abenzi bobubi baphinda babuye. Apha kwakhona, abezopolitiko bayacelwa ukuba bathathe amanyathelo anyanzelekileyo ngexesha lokuvalelwa okanye lonyango ukuze abenzi bobubi bafumane ukhathalelo olufanelekileyo lwengqondo. Libali elingenasiphelo elifuna ukumiswa nge-ASAP!
Uthintelo yenye yezona zinto zixhalabisayo. Siyakuxhasa ukuqulunqwa kwemidlalo enkulisa nasezikolweni ebonisa abantwana ukuba imizimba yabo yeyabo kuphela.
Sisebenza ekudaleni umhlaba jikelele "Amber Isilumkiso“Ukuze, njengaseMelika, lonke ityala lokuxhwila lingaxelwa. Lo ngumyalezo we-alamu ozenzekelayo kunye nomyalezo we-alamu we-siren oboniswe kwimizuzu embalwa kwifowuni ephathekayo yabo bonke abantu abangaphakathi komda othile wesiza sokuxhwila. Oku kubonakala kuneempawu zomntwana kunye nenkcazo kunye neenkcukacha zomqweqwedisi (umzekelo ipleyiti yelayisensi).
Kunye namagqwetha akhethekileyo nemibutho ekhankanywe apha ngasentla, sinceda ngokubonakalayo ukukhusela abantwana abasemngciphekweni kubenzi bobubi. Ukongeza, siyabatshutshisa abenzi bobubi ukuze bafumane isohlwayo sabo esifanelekileyo kwaye amaxhoba afumane ubulungisa.
I-95% yeminikelo yakho iya ngqo kukhuseleko lwabantwana!
© 2021 Izandla--off.org . Onke amalungelo agciniwe.